राजधानीमा स्मार्ट पार्किङ, प्रयोग गर्ने होइन त ? | नेपाली पब्लिक राजधानीमा स्मार्ट पार्किङ, प्रयोग गर्ने होइन त ? | नेपाली पब्लिक
होमपेज / अटो मोबाइल | फिचर | समाज |
राजधानीमा स्मार्ट पार्किङ, प्रयोग गर्ने होइन त ?
अरिष्मा मोक्तान २०७६, २४ जेष्ठ शुक्रबार १४:०३
काठमाडौँ – सवारी पार्किङलाई थप व्यवस्थित गर्न महानगरपालिकाले विभिन्न स्थानमा स्मार्ट पार्किङ सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ। महानगरपालिकाले ‘ह्विल्स ट्रली योर्स प्रालि’ र ‘एड गुरु’ सँगको सहकार्यमा स्मार्ट पार्किङ सेवा सञ्चालनमा ल्याएको हो। महागरपालिकाका अनुसार यी दुई संस्थाले ५ वर्षसम्म यस्तो पार्किङ सेवा सञ्चालन गर्ने गरी सम्झौता गरेका छन्।
पछिल्लो समय उपत्यकामा अत्यधिक सवारीसाधनका कारण पार्किङको ठूलो समस्या सिर्जना भएको छ। विशेष गरी काठमाडौँको मुटु न्यूरोडमा पार्किङको समस्या दिनप्रति दिन बढ्दै गएको थियो। यस क्षेत्रमा उचित पार्किङको व्यवस्था नभएकै कारण सवारीचालकहरूले जथाभावी पार्किङ गर्दै आएका थिए। त्यही समस्यालाई समाधान गर्न महानगरपालिकाले स्मार्ट पार्किङ योजना अघि सारेको हो। महानगरले स्मार्ट पार्किङ योजना सार्वजनिक निजी साझेदारीअन्तर्गत सञ्चालनमा ल्याएको छ।
यस्तो पार्किङ सुविधा महानगरपालिकाले गत वैशाखको शुरूदेखि सञ्चालनमा ल्याउने बताएको थियो। तर, विभिन्न कारणले गर्दा सञ्चालनमा ढिलाइ भएको महानगरपालिकाले बताएको छ। महानगरपालिका र दुई निजी कम्पनीको सहकार्यमा सञ्चालित स्मार्ट पार्किङ न्यूरोडका विभिन्न पाँच स्थानमा सञ्चालनमा ल्याएको छ।
महानगरपालिकाले पार्किङको धेरै नै समस्या रहेको न्यूरोड क्षेत्र र दरबारमार्गमा स्मार्ट पार्किङ सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ। महानगरले न्यूरोड क्षेत्रका खिचापोखरी (आरबी कम्प्लेक्सको अगाडि), विशाल बजार, पाको सडक (ताम्राकार कम्प्लेक्स भएको स्थान), प्यूखा मार्ग (रामेश्वर स्वीट्सको पछाडि) र धर्मपथमा स्मार्ट पार्किङको सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ। तर, हाल ती स्मार्ट पार्किङहरू परीक्षणकै क्रममा रहेको र छिट्टै नै औपचारिक रूपमा शुरूवात गर्ने महानगरपालिकाले जनाएको छ। महानगरपालिकाका अनुसार हाल सञ्चालनमा ल्याइएको स्मार्ट पार्किङ ‘अन स्ट्रिट पार्किङ’ हुन्। महानगरपालिकाले छिट्टै नै दरबारमार्गमा पनि यस्तो पार्किङ सुविधा सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ।
स्मार्ट पार्किङमा मोबाइल एप्सबाट १५ मिनेटअगावै स्थान बुकिङ गर्न सकिन्छ। अटो बिलिङ पद्धति र सवारीको प्रकारका आधारमा पार्किङ गर्न सकिने काठमाडौँ महानगरपालिका सार्वजनिक निजी साझेदारी विभागका निर्देशक धु्रव काफ्लेले बताए। उनका अनुसार यस्तो पार्किङमा सवारीसाधनको संख्यासमेत तोकिएको हुन्छ।
स्मार्ट पार्किङका प्रयोगकर्ताहरूले सवारीसाधन राखिएपछि केही चिन्ता लिनु नपर्ने बताए। अव्यवस्थित र असुरक्षित (चोरिने, कोरिने) समस्याहरू नआउने र ढुक्क भएर आफ्नो काम गर्न सकिने काफ्लेको भनाइ छ। उनले भने, ‘स्मार्ट पार्किङ पछिल्लो प्रविधिका साथ सञ्चालनमा ल्याइएकाले यसमा आयको संकलन पनि पारदर्शी ढंगले हुन्छ।’ काफ्लेका अनुसार स्मार्ट पार्किङका लागि महानगरपालिकाले स्थान उपलब्ध गराएको र बाँकी सबै कामहरू निजी कम्पनीले गरेका छन्।
उनका अनुसार पार्किङ शुल्कको कुल आम्दानीको २० प्रतिशत रकम महानगरपालिकालाई आउँछ भने बाँकी ८० प्रतिशत साझेदारी कम्पनीले पाउनेछन्। महानगरको राजस्व, कर र स्मार्ट पार्किङका लागि आवश्यक प्रविधि, जनशक्ति र सामग्री सबै व्यवस्था निजी कम्पनीले गर्नेछन्।
स्मार्ट पार्किङ प्रयोग गर्न चाहने सवारीचालकले पहिले ‘पार्क केटीएम’ एप्स डाउनलोड गरी आफ्नो सवारीसाधनको पार्किङ बुक गर्न सक्नेछन्। एप्स डाउनलोड गरेपश्चात एप्सलाई खोलेर ‘टू ह्विलर अथवा फोर ह्विलर’ भन्ने विकल्प देखाउँछ। आफ्नो सवारीसाधन ‘टू ह्लिर’ हो कि ‘फोर ह्लिर’ हो, त्यहीअनुसार क्लिक गरेर बुक गर्न सकिने ह्लिस ट्रली कम्पनीका सिनियर इन्जिनियर विक्रान्त कार्कीले जानकारी दिए। यो एप्समा कुन स्थान कति सिट पार्किङ बाँकी छ भनेर हेर्नसमेत सकिने उनले बताए।
स्मार्ट पार्किङ प्रयोग गरेबापत दुईपाङ्ग्रे सवारीका लागि प्रतिघण्टा २५ रुपैयाँ (करसहित) र चारपाङ्ग्रे सवारीका लागि प्रति घन्टा ६० रुपैयाँ (करसहित) लाग्ने कार्कीले जानकारी दिए। हालका लागि पार्किङ स्थानमा एलईडी स्क्रिन राखिएको छ, जसमा पार्किङ गर्नका लागि खाली रहेको संख्या र बुक भएको सवारी संख्याको विवरण देखाइएको हुन्छ। त्यही स्क्रिनबाट सेवाग्राहीहरूले खाली भएको वा नभएको सबै थाहा पाउनेछन्।
तत्कालका लागि ‘पोस’ नामक मेशिनको प्रयोगबाट बिल निकाली हातैबाट शुल्क संकलन गर्ने गरिएको छ। कार्कीले नेपाली पब्लिकसँग कुरा गर्दै भने, ‘केही समयपश्चात् अनलाइनमार्फत पनि तिर्न र बुक गर्न सकिने सुुविधा उपलब्ध गराउनेछौँ।’
अन्य पार्किङको तुलनामा स्मार्ट पार्किङ फरक हुन्छ। स्मार्ट पार्किङ सेवा नेपालमा पहिलो पटक सञ्चालनमा ल्याइएको हो। यसमा एप्सको प्रयोगबाट रिजर्भ गर्न सकिने, उचित पार्किङको स्थान थाहा पाउन सकिने, बुक गरेको समय, पार्किङ गरिएको स्थान, पार्किङ गर्न स्थान खाली भएको वा नभएको थाहा पाउन सकिने, एलईडीको प्रयोगबाट उपलब्ध स्थानहरूको जानकारी पनि लिन सकिन्छ। साथै यस्तो पार्किङमा मेशिनको प्रयोगबाट पनि सवारीसाधन प्रवेश गरेको र निस्किएको रेकर्ड पनि रहन्छ।
कार्कीले भने, ‘स्मार्ट पार्किङका लागि अहिले पर्याप्त प्रविधिको सुविधा नभएकाले विस्तारै परीक्षणको क्रममा रहेका छौँ। सिस्टम मात्र स्मार्ट भएर हुँदैन, हामी पनि स्मार्ट हुनुपर्‍यो र त्यो सुविधा प्रयोग गर्न कतिको स्मार्ट छौँ भन्ने कुरालाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्छ।’
महानगरपालिकाका अनुसार हाल सञ्चालनमा लइएको स्मार्ट पार्किङको क्षमता पाँच स्थानमा गरेर एकै पटकमा ८ सय दुईपाङ्ग्रे र ४० वटा चारपाङ्ग्रे गाडी पार्किङ गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ। विशाल बजारमा दुईपाङ्ग्रे सवारीका लागि १ सय ६५, प्युखामा १ सय ११, पाकोमा १ सय ५०, खिचापोखरीमा २ सय ३० र दरबारमार्गमा १ सय २५ दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधनको पार्किङ गर्न सकिन्छ।
त्यस्तै, चारपाङ्ग्रे गाडीका लागि धर्मपथमा ५० र दरबारमार्गमा ३३ सवारीसाधनका लागि स्थान उपलब्ध रहेको कार्कीले बताए। चारपाङ्ग्रे गाडीका लागि धर्मपथ र दरबारमार्गमा मात्र स्मार्ट पार्किङको व्यवस्था मिलाएको छ। धर्मपथमा दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधनका लागि भने व्यवस्था छैन। स्मार्ट पार्किङलाई व्यवस्थित बनाउन हाल १ सयभन्दा बढी जनशक्ति खटाइएको कार्कीले बताए।
दाङकाे उप–निर्वाचनका लागि ३४ मतदानस्थल
खाद्य अनुसन्धान ल्याब प्रयोगविहीन :…
खुलामञ्चमा ठेकेदारकै दबदबा